English ရုပ်ရှင် နင့် သီချင်း များကို ဒီနေရာမှာ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » English ရုပ်ရှင် နင့် သီချင်း များကို ဒီနေရာမှာ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
English ရုပ်ရှင် နင့် သီချင်း များကို ဒီနေရာမှာ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
Posted by blaze on Jul 13, 2011 in Entertainment, Movies/TV, Music | 32 comments
မိမိရှာဖွေ မ၇သော English ရုပ်ရှင် နှင့် သီချင်း များကို ဒီနေရာမှာ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကူရှာပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော် ဒေါင်းချင်သော ရုပ်ရှင်များရှိပါသည်။
ဘယ်ဆိုဒ်ကို သွားရင်ရတယ်ဆိုတာ ပြောပေးပါ။
ကိုfooter ဒေါင်းချင်သော ၇ုပ်ရှင်တွေကို ပြောပါလား။ ကျွန်တော်ကတော့
မြန်မာသီချင်းတွေ ဒေါင်းချင်၇င် အောက်က websites တွေမှာ ဒေါင်းလို့၇ပါတယ်ခင်ဗျာ။
youtude မှာ နဂါးနီရှိပါတယ်။ ဦးသုမောင်ဆိုထားတာပါ။
close to you, somewhere my love သီချင်းတွေ ရနိုင်ရင် လိုချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဆိုတော်နာမည်နဲ့ရော တောင်းချင်ရင်ရလား။
close to you ဆိုတဲ့လူတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ကို တစ်ချက်လောက် အဆိုတော် နာမည် နဲ့တွဲပြီ ပြောပေးပါခင်ဗျာ။ အဆိုတော်နာမည် နဲ့လဲ တောင်းချင်၇င်၇ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဒိန္နဒါနာ သူ့ဥစ္စာကိုခိုးလေ့ရှိသည် ဟောတိဖြစ်သတတ်
Rod Stewart ရဲ့ So Soon We Change လေးကိုညွှန်းပေးပါဦး
Rod Stewart ရဲ့ So Soon We Change သီချင်းက သူ၇ဲ့ Foolish Behaviour Album ထဲမှာပါတာပါ။ ၁၉၈၀ လောက်ကထွက်တာ။ ကျွန်တော်တောင် မမွေးသေးဘူး။ လိုချင်၇င်တော့ အောက်မှာ Foolish Behaviour Album တစ်ခုလုံးဒေါင်းလိုက်ပါ။
သီချင်း စာသားနဲ. ဂစ်တာလက်ကွက် ကော့ဒ် တွေရော ဘယ်မှာများဒေါင်းလို.ရမလဲဗျာ..
မြန်မာရော အင်္ဂလိပ်ရောပေါ့.. ကျေးဇူးပြုပြီး
ကျွန်တော် ၇ှာပေးမှာက English ရုပ်ရှင် နှင့် သီချင်း ပါ။ ဂစ်တာ ကော့ မပါဘူးခင်ဗျာ။
အွန်လိုင်းတွင် Game ကစားနိုင်သော website များ
မြန်မာ သတင်းဂျာနယ် website လိပ်စာများ
ဖက်စရာ မှတ်စရာ website လိပ်စာများ
နည်းပညာ website လိပ်စာများ
http:// https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a……… ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း…
http://www.4shared.com/file/80626166/b5161ee5/GTunnel.html?cau2=403tNu… GTunnel.exe ကိုလိုချင်ရင်….
http://www.download.com/ThreatFire-AntiVirus-Free-Edition/3000-2239… နဲ့ Virus ကိုရှင်းတဲ့ software…..
http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Partition-Magic.sh… Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software…
http://www.softpedia.com/get/internet/E-mail/Mail/Utilities/Gmail-Mana… Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁)
http://www.manageengine.com/products/desktop-central/software-hardware… Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software…
http://myanmaritpros.com/profiles/blog/show?id=1445004%3ABlogPost%3A67… ISA Server .ကိုမြန်မာလို လေ့လာဖို့…..(၁)
http://download.cnet.com/Active-SMART/3000-2086_4-10055071.html?part=d… Active SMART Software လိုချင်ရင်..
http://www.softpedia.com/progDownload/google-talk-shell-Download-71248… Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software….(၂)
မြန်မာသီချင်းတွေနားထောင်လို့ ရတယ် ကူးလို့ရတဲ့ sites တွေပါ
• http://www.myanmarsoungs.net ဒီဆိုက်ကတော့ dowmload ဆွဲလို့လွယ်တယ်
http://myanmardota.ning.com/ http://www.kd-pavza.si/datoteke/200412231201341.swf http://newworldnanda.ning.com/profiles/blogs/3451740:BlogPost:18969 http://s283.photobucket.com/albums/kk311/impimg/events/new-year/f08… http://www.petalia.org/Songs/flash/bluenight.htm
http://nattabin.ning.com/profiles/profile/emailSettings?xg_source=m… တစ္ဆေ ဘုံ
အကို share ထားတဲ့ websites လိပ်စာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ အကိုဘာသာ post တစ်ခုနေနဲ့ တင်၇င်အားလုံးအကြိုး၇ှိမှာပါ။
အစ်ကို thepiratebay.com ကလေ ရုံမှာတင်နေတုန်းကားတွေရော ရှိလား ။
ညီမစမ်းဖူးတယ် သိပ်မလုပ်တတ်လို့ ။ သူများတွေတော့ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေတယ် ပြောတာပဲ။
funshion ကတရုတ်ကားတွေပဲရှိတာလားဟင် …. ။
အမ လိုချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ကဘာလဲမသိဘူး။ ကျွန်တော်ရှာပေးပါမယ်။ thepiratebay.com က torrent ကနေ ဒေါင်း၇တဲ့အတွက် နဲနဲတော့ခက်ပါတယ်။ ………………..
Linkin Park – iTunes Festival London EP (2011) FS WU
ဆိုတာလေး နားထောင်ချင်လို့ ပါ
ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ် လဲ တွေ့ ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ Mediafire ,Multiupload or Ifile.it မှာပြန်တင်ပေးနိုင်မလားဟင်..
အဲ့မှာ ကျွန်တော် link နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ဆီက ဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။
အဲ့မှာ Adele သီချင်း rolling in the deep ကိုသူတို့ ပြန်ဆိုသွားတယ်။ piano လေးနဲ့။
ကျေးဇူး..ကမ္ဘာပါ ကို ဘလာဇီ
ဟုတ်ကဲ့ပါအကို၊ အကိုက အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေလို့ပြောထားတယ်နော် ညီမက မြန်မာသီချင်း ဟေမာနေ၀င်းသီချင်းတွေ ကိုလိုချင်တာအကို ၊ ရနိုင်မလားမသိဘူးနော်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ညီမလေးလိုချင်တဲ့ သီချင်းကို ဒီမှာ ရှာကြည့်ပါ http://www.myanmarsongs.net …. အဲဒီထဲမှာ အဆိုတော်နာမည်နဲ့လဲ ရှာလို့ရတယ်။ ဒေါင်းလို့လဲ ရပါတယ် …
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် english သီချင်းပဲ ရှာပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ ရှာပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်က link မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Blaze မမွေးခင်က ကားတွေချည်းဘဲ။
Unlock pass if requires:encoders@hd-bb
The final countdown (1980) ကတော့ ရှာတာ မတွေ့ဘူးခင်ဗျာ။
the final countdow ကတော့ရှာ မတွေ့ဘူးခင်ဗျာ။
ညီမက Hangover II , Harry potter, Gnomeo & Juliet ကြည့်ချင်တာပါ ။ ညီမဒေါင်းတာတွေ သေချာ မလုပ်တတ်တော့ တဆင့်ချင်းလေး ပြောပြပေးသွားပါနော် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
vicente.4500@gmail.com သို့ mail ပို့ပြီ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီ post လေးကို ပိတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ တောင်းဆိုချင်တယ်ဆို၇င် vicente.4500@gmail.com သို့ mail ပို့ပြီ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်ဖြေကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ g-talk မှာလဲ ADD ထားလို့၇ပါတယ်။ သင့်ဆီသို့ movie , music နှင့်ပတ်သက်သော link များေ၇ာက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကောင်းရောကွာ အီးမေးက သူများခိုးသွားတာနဲ.တော.
ဟိုးးးးးးးးးးးအရင်တုန်းက ၀ယ်ထားတဲ့ Karaoke tape ထဲက သီချင်းတွေကို ပြန်လိုချင်လို့ မေးကြည့်တာပါ။ ဘယ်သူဆိုမှန်းတော့ မသိဘူး။
U-BEST LASER WORLD က ထုတ်တဲ့ Love songs စီးရီးတွေထဲကပါ။
အစ်ကိုရေ skid row ရဲ့ 18 and life သီချင်းကိုဒေါင်းချင်ပါတယ်ဗျာ ဘယ်ကဒေါင်းရမလဲမသိဘူး
( ရဘူး ပက်ချံတောင်းဒယ်
အရဂါး ဒေါင်းလို့ရတဲ့ စတုဒီသာ ဆိုက်တွေကိုညွှန်းပါဦး
ဂျန်းဘုံနဲ့ ကောက်ရိုးပုံမှာ ပတ်ပြေးတာကိုသတိတရရှိနေလို့ပါ
ကူညီဘာ ကျေးဂျူးမမေ့ပါဘူး )